lol - SomaliNet Forums
Postby X.Playa » Mon Apr 15, 2019 7:27 am
Hadhow marku tooso ayuu odhanayaa doorashadii maxaa ku dhacay while sleeping on the thrown
Postby kaliil » Mon Apr 15, 2019 7:30 am
Hadhow marku tooso ayuu odhanayaa doorashadii maxaa ku dhacay
Postby Khalid Ali » Mon Apr 15, 2019 12:41 pm
Dee doorashada Somaliland ciiro wa useless Somaliland wu seexinlaha hadaynu u dhiibno
Postby NubianQueen » Mon Apr 15, 2019 2:28 pm
Coffee or tea is your friend lol.
Postby Timiro1999 » Mon Apr 15, 2019 3:10 pm
Ciro was nin ILLAAHAY yaqaana ee ka warama kii iimaanku go'naa ee muuse shaani
Maalin walba dad ka dacwoonaya dhulkooda uu ka qaaday ayaa video iska soo duuba maanta islaamo ayaa hooyadii ka ashkataynayey.
Iimaan laawe gaajo ku kor ah oo umalaynaya inuu aduunka weligii joogayo imika xaarantii ayaa ifka uga soo baxday.
Hal xaaran ahi nirig xalaal ah ma dhasho
Xaarplaya saqajaan gidaarada raacaya nijaas waaxid
Postby DayrBare » Mon Apr 15, 2019 3:37 pm
Odaygu Ha iska hurdee daaya, ol olihii ayuu kudaalay. wadani isagaa lahadhay Ayaan aaminsanahay, ninkale hadii uu wadani sharixilahaa muuse wuu kabadin lahaa lakiin odaygan tacbaanka ah waxaa lagudboon inuu iska wareejiyo kursiga hadii kale madaxnimo kadheer wadani.
Postby theyuusuf143 » Tue Apr 16, 2019 10:59 am
Haduu Duur , ama xitaa xirsi bahalka ku wareejiyo , kulmiye waa loo yaabaa. Laakiin intu isagu joogo anigaaba kuugu dhaaranaya inaanu weligii xisbigu guul keenayn. Dhawr sano kadib ururada dib loo furaya wuuna iska baaba,aya , xoogag kalaa Soo baxay.
Postby Surprise » Tue Apr 16, 2019 11:02 am
No reason to defend that handicap who just accepted the election fraud without putting up a fight
Postby Timiro1999 » Wed Apr 17, 2019 10:47 am
Adeerka Silanyo ee xafayaada xidhnaa ee isagoo socda indhaha isku haysan jirey ee tobanka jeer kursigii uu ku fadhiyey ka dhici gaadhay dheelalow dartii la waran.
Postby theyuusuf143 » Wed Apr 17, 2019 1:35 pm
Sawtaanu isagoo nool dhaxal wareejinay. Kaasi galbay ku kale oo muuse ka gaabiyaana iga walaanu shankaron shaf saarayn hadii bilaal adimo.
Postby Khalid Ali » Wed Apr 17, 2019 2:22 pm
Siilaanyo xanuun ba heley laakin wuxu aha libaax in the 1980s ila iyo 2005 he was fit 2011 wixi kadambeye bu xanuunsaday siilaanyo is atleast 20 years older than ciiro. Even muse biixi is older t ciiro but much more sharper
Postby Futurist » Wed Apr 17, 2019 5:32 pm
Cirro would beat up visiting Ambassadors if he has disagreement with them
He would be dangerous for Somaliland
We should unleash him on Farmaajo